Ny LATAM dia hanohy ny serivisy USA sy Chile ihany
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Ny LATAM dia hanohy ny serivisy USA sy Chile ihany
Ny LATAM Airlines Group sy ny mpiara-miasa aminy dia nanambara androany fa hampiato vonjimaika ny tolotra iraisam-pirenena fanampiny hatramin'ny 30 aprily 2020 izy ireo, noho ny fameperana ny fitsangatsanganana apetraky ny manampahefana nasionaly sy ny fangatahana ambany noho ny aretin'ny COVID-19 (Coronavirus).
Ireo mpandeha tratry ny fanafoanana ny sidina dia tsy mila mandray andraikitra avy hatrany. Ny sandan'ny tapakilan'izy ireo dia ho tazomina ho crédit amin'ny dia ho avy miaraka amin'ny fahafaha-mandahatra ny sidina hatramin'ny 31 desambra 2020, tsy misy sarany fanampiny.
Sidina iraisam-pirenena izay hanohy hiasa amin'ny hatetika voafetra:
Ny LATAM Airlines Brazil sy ny LATAM Airlines Group dia hiasa serivisy eo amin'i Santiago / SCL sy São Paulo / GRU.
Ny LATAM Airlines Brazil sy ny LATAM Airlines Group dia hanohy hanidina avy any São Paulo mankany Miami sy New York ary hanompo an'i Miami sy Los Angeles avy any Santiago.
Ny fitohizan'ireny zotra ireny, na ny famerenana ireo serivisy iraisam-pirenena hafa, dia hiankina amin'ny fanovana ny famerana ny fivezivezena apetraky ny firenena misy ny vondrona miasa sy mangataka ary hampitaina amin'ny fotoana mety.
Hakatona vonjimaika ireo zotra iraisam-pirenena hafa rehetra tantanan'ny LATAM Airlines Group sy ny mpikambana ao aminy.
Maldives dia mijoro manohitra ny toeram-pialantsasatra izay mampiakatra ny sarany fanafoanana
Filoham-pirenena amerikana Trump: 200,000 19 amerikana maty noho ny COVIDXNUMX no vaovao tsara